Tired by endless time limits for postings and number of CVs? ﻿
Tired by endless time limits for postings and number of CVs?
Tags: CV postings credit money time limits
Bored by time limits of job boards packages? Did you ask yourself many times 'Why you should buy3or 6months, when you need onlyafew people?
JobsInYangon comes withasolution for YOU!!!
Orderacredit and use it as long as you like and for you like!!! No more limits and quotas!!!
There is alwaysatime foragood news. We want the job market to be as efficient as possible, so we are introducing pay as you use model for very very reasonable price both for postingajob offer or SearchingaCV of potential jobseekers. We will post each of your job offers for 1000 MMK each and you can search and use every of our 50 000 database CVs for only 1500 MMK each. It is only up to you when you use it and for which position. There is no hurry and stress to utilise it to its utmost. There is even no limit for how much budget you set up. Call our sales to learn more and introduce you to this excellent opportunity, not pressurizing your budget.
If you make an order in May we will give you $ 100 gift voucher to every order of $ 100!
Hurry up and call us at 012306103 or write to info@jobsinyangon.com.
အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့် အသုံးပြုရသည့် Job Board Packages များကို ငြီးငွေ့လာပါသလား? လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင် လူကြီးမင်း အောာက်ဖော်ပြပါမေးခွန်းကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်မေးခဲ့ပြီးပါသလဲ?
“လူကြီးမင်း ဝန်ထမ်းအနည်းငယ်ခန့်ရန်လိုအပ်သောအခါ လူကြီးမင်းမည်သည့်အတွက်ကြောင့် ၃ လ သို့မဟုတ် ၆ လ package ကို ဝယ်သင့်ပါသလဲ။”
JobsInYangon မှ လူကြီးမင်းအတွက် ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူ လာပါသည်။
Credit ကို မှာယူပြီး ၄င်းကို လူကြီးမင်းကြိုက်သလောက် လူကြီးမင်းကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာအတွက် အသုံးပြုပါ။ နောက်ထပ် ကန်သတ်ချက်များမရှိတော့ပါ။
သတင်းကောင်းများအတွက် အမြဲတမ်း အချိန်တစ်ခုရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်ကို တတ်နိုင်သမျှ အကျိုးရှိအောင် ၊ အချိန်တိုအတွင်း သက်ရောက်မှုရှိအောင် တတ်နိုင်သမျှ ပြုလုပ်လိုပါသည် ။ထို့ငြောာင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် potential ဖြစ်သည့် ဝန်ထမ်းများ၏ CVကို ရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် လူကြီးမင်း၏ အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များကို တင်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ၄င်းနှစ်ခုလုံးအတွက် အလွန်သင့်လျော်သည့် ဈေးနှုန်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် ပေးချေမှုအသစ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ အလုပ်တစ်ခုတင်ရန်အတွက် ဈေးနှုန်းသည် ကျပ် ၁၀၀၀ ဖြစ်ပြီး CV 50 000 ကျော်နှင့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တိုးလာသည့် CV များဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ CV Database မှ CV ရှာလိုလျှင် CV တစ်စောင်ကို ကျပ် ၁၅၀၀ ဖြစ်ပါသည်။
၄င်းကို လူကြီးမင်း မည့်သည့်အချိန်နှင့် မည်သည့် ရာထူးအတွက်ကို အသုံးပြုမည်မှာ လူကြီးမင်းပေါ်တွင်သာ မူတည်ပါသည်။
၄င်းကို အသုံးပြုရန်အတွက် အမြန်မလိုသလို စိတ်ဖိစီးမှုလည်းမလိုပါ။ လူကြီးမင်း အသုံးပြုနိုင်မည့် Budget အတွက်တောင်မှ အကန့်အသတ်မရှိပါ။ ပိုမိုသိရှိရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ကျွန်ုပ်တို့၏ sales သို့ဖုန်းခေါ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မှ လူကြီးမင်းအား ပိုကောင်းမွန်သော အခွင့်အရေးများကို မိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ Budget အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စရာမလိုပါ။
လူကြီးမင်းသည် မေတွင် order ပြုလုပ်ခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် $ 100 အမှာစာတိုင်းအတွက် လူကြီးမင်းအား $ 100 gift voucher ကို ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ၁၂၃၀၆၁၀၃ သို့ မြန်မြန်ဆက်သွယ်၍သော်လည်းကောင်း info@jobsinyangon.com သို့ အီးမေးလ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပါ။